Ikhaya leHolide yaseRustic ePiegaro kufutshane neTavernelle Aquatic Park
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguIris - BELVILLA
UIris - BELVILLA unezimvo eziyi-2286 zezinye iindawo.
Eli khaya liqhelekileyo leeholide ePiegaro elinamagumbi okulala ama-5 linomtsalane ongathandekiyo njengenye ipropathi. Ilungele usapho olukhulu okanye iqela labantu abali-10, inegadi enefenitshala apho ungaphumla khona nabantu obathandayo okanye udlale nezilwanyana zasekhaya. Iibarbecues nazo ziyenzeka kwaye ungakonwabela amakroti ombono othandekayo wenduli.
Iikhilomitha ezi-5 kuphela kude kukho iTavernelle Aquatic Park, apho unokonwabela ukuqubha kunye nokutshiza. Imyuziyam yeGlasi kwi-10 km iya kukuthakazelisa ngonaphakade. IPomario Cantina kumgama oziikhilomitha ezili-17 kulapho uhambahamba khona kwizidiliya kwaye ukonwabele iiseshini zokungcamla iwayini. Iindawo zokutyela kunye neevenkile ezinkulu zihlala kumgama oziikhilomitha ezisi-8 ukusuka kwindawo yakho.
Eli khaya likwaza nomgangatho wamaplanga kunye neesilingi ezidityaniswe nempahla yakudala kunye nethambileyo. Kukho iikhitshi ezi-3 ezivulekileyo kunye namagumbi amathathu okuhlala / okutyela kweli khaya.
Isikhululo seenqwelomoya saseSan Francesco d'Assisi sikumgama oziikhilomitha ezingama-42.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (ikhitshi elivulekileyo(ihobhu, ihood, ifriji, isitya sokuhlambela), Indawo yokuhlala/igumbi lokutyela(iTV, itafile yokutyela, indawo yokuhlala), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokuhlambela(ishawa, isitya sokuhlamba, indlu yangasese, ibhidethi))
Kumgangatho woku-1: (ikhitshi elivulekileyo (ihobhi, ihood, ifriji, isitya sokuhlambela), ikhitshi elivulekileyo (ihobhi, ihood, ifriji, isitya sokuhlambela), Indawo yokuhlala/igumbi lokutyela (iTV, itafile yokutyela, indawo yomlilo, indawo yokuhlala), Indawo yokuhlala/igumbi lokutyela (TV , itafile yokutyela, iziko, indawo yokuhlala), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokulala(ibhedi enye, ibhedi eyodwa), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokuhlambela(ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese, ibhidet), igumbi lokuhlambela( ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese, ibhidet))
igadi, ifenitshala yegadi, iindawo zokuhlala zelanga, i-BBQ, indawo yokupaka, iparasol
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-2 286 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Izimvo eziyi-2 286